Wafdi Turki ah oo kormeeray dekedda magaalada Kismaayo & hami ay u qabaan maamulka dekedda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wafdi Turki ah oo kormeeray dekedda magaalada Kismaayo & hami ay u qabaan maamulka dekedda
Mareeg.com: Safiirka dowladda Turkiga u jooga dalka Soomaaliya, Olgan Baker iyo wafdi uu hogaaminayo oo shalay booqday magaalada Kismaayo ayaa faahfaahino dheeraad ah kasoo baxayaan sababihii uu halkaas u tagay.
Wafdiga ayaa loo gudbiyey xarunta Madaxtooyada maamulka Jubbaland waxaana halkaa uga furmay shir u dhaxeeyey madaxda Jubbaland oo uu ugu horeeyey Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Madoobe iyo wafdiga safiirka Turkiga ee Soomaaliya.
Shirkan oo ahaa mid saxaafadu dibad-joog ka ahayd ayaa looga waramay kolkii uu soo idlaaday, waxaa si wada jir u hadlay Madaxweyne Axmed Madoobe iyo Safiirka Turkiga Olgan Baker.
Madaxweynaha maamulka Jubaland, Axmed Madoobe ayaa sheegay in ay ka wada hadleen arrimo la xiriira waxbarashada, caafimaadka iyo hormarka dalka.
Amb. Olgan Baker ayaa sheegay in maamulka Jubbaland ay dowladda Turkiga ka caawin doonto dhanka waxbarashada oo uu sheegay in deeqaha uu bixiyo Turkiga laga qayb galindoono Jubbaland, Wuxuu sheegay in caafimaadka ay samayndoonaan goobo caafimaad iyo qalabaynta xarumaha caafimaadka.
Markii uu soo dhamaaday shirkan waxay wafdigi booasho ku tageen xarunta dekeda magaalada Kismaayo oo dayac ka muuqdo wuxuuna safiirku sheegay in ay qodobadooda ku darayaan wax ka qabadka dekeda magaalada Kismaayo oo in ka badan 25 sano aan helin wax dayactir ah.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in laga yaabo in Turkigu doonayaan in mustaqbalka lagu wareejiyo maamulka dekedda Kismaayo, iyadoo ay horay dekadda Muqdisho ula wareegtay shirkad Turki ah oo lagu magacaabo Albeyrak.